ကျမရဲ့နေရာလေး: January 2019
Santa Barbara စန်တာဘာပလာမြို့လေးကနေမနက်စောကြီးထ ချီတက်လာတာမိုးလင်းမှ LA လော့အင်ဂျလိစ် Union stationဘူတာရုံကိုရောက်တော့တယ်။
ဒါက လော့အင်ဂျလိစ် ဘူတာရုံအောက်ထပ်...
ကိုယ်တို့က မြို့ပတ်Tour ကားနဲ့တမြို့လုံးပတ်မယ်ပေါ့..ဒီလိုစိတ်ကူးရှိတော့ ကားသွားရာလမ်းကြောင်းကို ရှာပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ မဟာပလန်ကြီးချလို့ ပြေးပြေးလွှားလွှား၊ ရထားဆိုက်လို့ ဘူတာဆင်းဆင်းခြင်း ဒါတ်ပုံလေးချိန်မယ်ရှိသေး..သူတို့က ပြာယာခပ်ပြေးလေတော့ ဒီကမရိုက်ရဘဲ အပြေးလိုက်ရတယ်..။ စိတ်လေလိုက်တာဗျာ..😕 ဘူတာရုံအပြင်ရောက်မှ မှတ်တမ်းတင်ရ..😁
(ခရီးစဉ်တခုလုံးနီးပါး ကင်မရာက နာရီအချိန်မပြောင်းမိ 😆 NY-NJ အရှေ့ဖက်ကမ်းကအချိန်နဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ LA-SF အချိန် ၃နာရီကွာ) ရက်စွဲပါတာက ကင်မရာနဲ့ရိုက် မပါတဲ့ပုံတွေက
ဖုံးနဲ့ဆွဲ ဖုံးတဖက် ကင်မရာတဖက် မျက်မှန်မဲကြီးနဲ့😎 မှန်တာပြော သေချာမမြင်ရပါ...😝
ကိုယ်ကသူတို့ဘတ်စကားစီးချင်တာ...ခလေးမလေးက အတင်းဘဲ Uber မှ အူပါး...
ဒီနေရာလေးမှာ ကားဂိတ်စဆိုပါတော့ ဒါတ်ရှင်တွေထဲအမြဲမြင်ရလေ့ရှိတဲ့နေရာလေး တိုးရစ်ပေါ လူများ တဲ့နေရာပေါ့။ အဲ့အမြင့်ကနေတက်ပြီး Hollywood စာတမ်းရှိတဲ့တောင်ပေါ်လှမ်းမြင်ရ...ကားလက်မှတ် လည်းဖြတ်ပြီးပြီ အချိန်လေး ၁၅မိနစ်ဘဲကျန်...
ကိုယ်တို့ကဗိုက်ဆာပြီ..အောက်ထပ်က စတားဘတ် မုန့်ဝယ်ကော်ကော်သောက်..အပေါ်မတက်တော့ဘူး
ဒီလမ်းကတော့ ဟော်လီဝုဒ်စတားကြီးတွေနံမည်တွေရေးထိုးထားတဲ့လမ်းပေါ့ ရုပ်ရှင်ထဲကသရုပ်ဆောင်လို
ဝတ်ထားတာတွဲဓါတ်ပုံရိုက်လည်းရ.."ပိုက်ချံပိုက်ချံ$$$ မပေးလို့များ အမူံဖြစ်တွားမယ်မှတ်" NY မြို့လည်မှာ
နေရာတကာတွေ့ရာရိုက်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကျားကျားက မရိုက်ပေး တူမလေးကလည်း ငေးမောနေတော့ ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုး..ဆယ်ဖီတဲ့..သူများတွေရိုက်တာများ လှတပတထွက် ကိုယ်များဆယ်ဖီဆိုရင် နဖူးဘဲပါတတ်
😄 ဒီတခါတော့ နဲနဲအိုကေ..နောက်ကလူတွေလည်းပါ..အဟားဟား..မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပြီ...
ကားစထွက်တော့ ဘေးကတရုတ်ဘုံကျောင်းလားမသိ...လက်ပြနူတ်ဆက်ရတာအမော..မိုးကောင်းကင် ခေါင်မိုးတခုထဲကလူသားအချင်းချင်းဘဲလေဟယ်...သူတို့က ရက်အင်ဒီးယန်းလိုဝတ်ပြီးဗုံတီးနေတာ..
ကားကြီး ဘီးလိမ့်တာသိပ်မကြာဘူး..ကွေ့တော့ အဲ့လမ်းမတန်းကို ပြန်ကြည့်မိ...
နားကျပ်တပ်ထားတော့ သူရှင်းပြတာတွေနားထောင် ဘယ်ဖက်က ဘာဖက်က ဘာညာကွိကွပေါ့လေ..ပြော
နေတုံးကတော့ သိပေမဲ့ ခုတလ ၂လကြာတော့ အဖွားငယ်လေးငီးငီး မမှတ်မိတော့..ဟီး😉 လမ်းမဘေးက
မြက်ခင်းမှာ ပန်းပုပုံစံချထားတာ သူ့အဓိပ္ပါယ်သူရှိပါလိမ့်မယ်..အဲ..ကွန်ကရစ်လား သံနဲ့လား..မေ့နေလို့ဆို
နားကျပ်ထဲကပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြရှာတာ ဘယ်အဆောက်အဦက ဘယ်သရုပ်ဆောင်အမြဲလာ ဘယ်သူ လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်လိုဘာညာ..အရမ်းကောင်းပါတယ်..သွားလည်ကြပါလေ..မြို့ပတ်ကားကြီးစီးရတာ
သူပြောပြတဲ့သရုပ်ဆောင်နံမည်တွေ မမှတ်မိ..တကယ်ဆို မသိတာများပါတယ်လေ😁😂 ကြားမိတာ တခုက ဟောလိဝုဒ်ဖက်သွားကြမယ်ဆိုလားဘဲ...
ဒီလမ်းကနံမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေနေကြတဲ့နေရာတဲ့...Beverly Hills တောင်ပေါ်ကအိမ်တွေက ကိုယ်တို့ လေယာဉ်ပေါ်ကနေမြင်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်တွေနေမှာ..အရမ်းလှတယ်...အပေါ်ကနေကြည့်တော့ ရေကူးကန်တွေနဲ့
ဓါတ်ဆီဆိုင်ကလည်း..ကိုယ်တို့အရှေ့ဖက်ကမ်းမှာဆို နှင်းကျချိန် လေးပြီးချက်ချင်းကျိုးကျမဲ့ခေါင်မိုးပေါ့..
အုံးပင် ထန်းပင်တန်းလေးတွေနဲ့ အဆောက်အဦမြင်ရတာ သဘောကျ..မက်စီကန်ပုံစံ Beverly Hills City Hall
Santa Monica ကမ်းခြေ ရောက်မှဆင်းမယ်ဆိုပြီး..မထတန်းထိုင်လိုက်သွားကြတာ....ဘယ်နားရပ်ရပ်
ဒီဖက်ကအိမ်တွေလှလို့ ကားလမ်းလည်းလှ....သူဋ္ဌေးတွေနေတဲ့နေရာဖက်မှာမို့...ပါလေနောက်ပိုင်း ကမ်းခြေကအပြန် သွားတဲ့နေရာ..အိမ်လေးသေးသေးနဲ့ ခြံခတ်ဝင်းခတ်အထပ်ထပ်...လုံခြုံရေးအခြေအနေ မကောင်းပုံ..ဟီးဟီး
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်း မက်စီကန်အငွေ့အသက် Good Shepherd Catholic Church Santa Monica Blvd Beverly Hills CA
ဒီကားလမ်းSanta Monica Blvd ညာဖက်တလျောက်က အိမ်တွေမှာအနုပညာရှင်တွေများတယ်တဲ့.. သူတို့ လည်းလမ်းထွက်လမ်းသလား သွားလာတတ်တယ်ဆိုလို့..ဒီကိုကိုကြီး ဦးဦးကြီးလည်း မင်းသားများဖြစ်လေ မလားလို့...မှတ်တမ်းဆွဲထားရသေး😎
အဲ့ဒီSanta Monica Blvdလမ်းမတလျောက် ညာဖက်မှာ Park တွေရှိတယ်..သေသေချာချာလုပ်ထားတာ
Beverly hills garden park အကြီးကသပ်သပ်..လမ်းမပေါ်ကခပ်သေးသေးလေးတွေ အရမ်းလှဘဲ..ငေး
ကြည့်နေတာ ဒါတ်တွေ ဗီဒီအိုတွေ ဘာတွေမရိုက်နိုင်အား..
ဘာကြီးလဲ!!ဟိုအဆိုတော်ကြီး ရေချိုးကန်မှာသေတာ သူနေခဲ့တဲ့ဟော်တယ်လည်း ပြတယ် ဘယ်တ ခုကြောင်း !!! ရူပ်ကုန်ပြီ... လေ။ ဒီမှာတော့ နံမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရိုက်တာမှိတ်မိလား..ဇာတ်ကားထဲက မင်းသားက "မက်ကိန်း"(ဇာတ်လမ်းထဲကနံမည်)ဆိုတာပေါ့..ခရစ်စမတ်ရာသီဆို အဲ့ကားအမြဲပြန်ပြတတ်...
ဒီ FOX စတီဒီယိုခြံကြီး စကနေဆုံး Video ရိုက်ထားမိတယ်..မနဲမနော် အကျယ်ကြီးဘဲ..ဒီလိုရုပ်ရှင်ခြံကို
လည်ချင်တာ နောက်တခါပြန်လာဖို့တော့ စာရင်းတို့ထားတာဘဲလေ...
တိုက်ခန်းတွေလည်း ပြင်ဆင်ပုံစံ အမိုက်စားဘဲ..ကာလာမျိုးစုံ..
ကိုင်း...Santa Monica ကမ်းခြေဆိုတာ..Baywatch ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်တဲ့နေရာပေါ့.. ကိုယ်တို့ငယ်ငယ် ကအရမ်းကြည့်ပြီး ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့...
နောက်တခါမှ အဲ့ဒီကမ်းခြေမှာ တကဲ့ဟောလီဝုဒ်စတားကြီးတယောက်နဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ခဲ့တာ အာလူး
Posted by မီးမီးငယ် at 12:34 PM2comments Links to this post
Labels: US-California, US-San Fransisco
Santa Barbara စန်တာဘာပလာ ကနေ လော့စ်အင်ဂျလိစ် LA ကို ကားနဲ့မောင်းသွားရင်လည်း၂နာရီနီးပါး၊ ရထားလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း 😀၊ ကိုယ်တို့လေယာဉ်နဲ့လာတာက နာရီဝက်သာသာရယ်...။ ဒီလိုခရီးတိုကိုလေး ငယ်ငယ်တုံးက တာချီလိတ်-ကျိုင်းတုံတခါ လေယာဉ်နဲ့ပြန်လာဖူးတယ်။ နာရီဝက်
လောက်ပါဘဲ..။ ကားကလည်းဌားထားပြီးဆိုတော့ သူကကားမောင်းမလို့တဲ့၊ ဘာရမလဲ မနဲ ဘီဒိုအာဏာ ပါဝါသုံးပြီးပယ်ချရတယ်။ သူကမောင်းပေမဲ့ဘေးက ဂူဂဲမမတချိန်လုံးမလုပ်ပေးနိုင်၊ ဘေးဘီငေးမောခံစား
ကြည့်ရူရအုံးမယ်လေဗျာ..။ ကဲ..ဘတ်စ် ရထားရွှေးဆိုတော့ ဒီကရထားရွှေးတာပေါ့..။ သက်တောင့်သက် သာနဲ့ခရီးသွားခြင်းအရသာခံစားတတ်ဖို့ ရွှေးချယ်တတ်ရတယ်ကွဲ့..။
ကိုယ်ကဂူဂဲထားပြီးသားသူက မယုံလူတကာမေး၊ ထိုင်းဆိုင်ကနေအပြန် ဘူတာရုံသွားကြည့်၊ ကားမထား ရမှာစိတ်ပူ၊ ကိုယ်ကရပါတယ်ဆို တာမယုံ၊ ညကတဲက ရထားလက်မှတ်အွန်လိုင်းကနေဝယ်ထား၊ မနက် သွားခါနီး အောက်က ကောင်တာကိုကိုနားသွားမေး၊ ဟိုက မရဘူးထင်တယ်ပြော၊ အားချင်း ကားဌားပြီး
ဘူတာဆင်းဖို့လုပ်၊ ခလေးမလေးရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဖက်သွားကြို၊ တစ်ပေး 👀 ဟိုရောက်တော့ ကားထား လို့ရတာရှိ၊ ဟွန့်..ဘာရမလဲ ပြောနေကျစကားနဲ့ ဖိပေးရတယ်..တွေ့လား မိန်းမစကားနားထောင် အိုတောင်
မဆင်းရဲ...😆😂 စကားပြန်မလာနိုင်သေး...အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်နေ 😜
ဒီမြို့လေးက college university4ခုတောင်ရှိတော့ ကောလိပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ တယ်။ ဘူတာရုံမှာ သူတို့ပိတ်ရက်ဆိုတော့ အများကြီးပါဘဲ အိတ်ကြီးငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ပေါ့ဗျာ..။ ဒီမြို့လေးကအပမ်းဖြေဖို့အရမ်းကောင်းနံမည်ကြီးပေါ့..
ရထားမှန်ဆိုတာကသိတဲ့အတိုင်း သိပ်မကြည်ပါဘူး..မြင်မိသလောက် ခံစားကြတာပေါ့နော့်
ရထားသွားချိန်တဖက်ကလည်းကြည့် ဗီဒီယိုကလည်းမလွတ်စေရ ဓါတ်ပုံလည်းတချက်ချက်နှိပ်ရ နဲတဲ့ စကေးလားနော်...😉😊
ကားတန်းကြားထဲမှာ လူတွေသုံးဖို့ရွှေ့ပြောင်းအိမ်သာ အမိူက်ပုံးကြီးတွေလည်းချထားပေး...
ကားလမ်းကပ်ရပ် မြေကွက်လပ်ကြားထဲမှာအိမ်သေးသေးလေးတွေနဲ့ သူတို့နောက်မှာ ပင်လယ်ဘဲ...
ရထားရဲ့ တဖက်ခြမ်းကတော့ Santa Ynez Mountains ပေါ့ဗျာ...
ကားသင်္ချိုင်းကတော့ ကြီးမှကြီးဘဲ....
ကဲ...ကားဝယ်ချင်ရင်ပြော shine ပြီး ပို့ပေးမယ်..😬😁
နဲတဲ့ကားကွင်းကြီးလား..တစီးမှ အကောင်းမတွေ့ 😂😝😅 ဒါတွေကစနေနေ့သွားတုံးက တနင်္ဂနွေမှာ
SB မှာဘဲလည်ပြီး တနင်္လာနေ့မှာ နောက်တခေါက်ရထားစီးပြီး LA ပြန်ကြတယ်..။
အော်...ဆန့်ကျင်ဖက်ဆိုတာအမြဲဒွန်တွဲနေတယ်တဲ့..သိလား..သဘာဝကပေးတဲ့အလှတရားလည်းရှိသလို လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ မလှတရားလည်းရှိပေါ့တော်... ရထားလမ်းနဲ့အမိူက်ဆိုတာက တွဲကိုတွဲနေမှ ရတယ်ဆိုလား...😁
Posted by မီးမီးငယ် at 1:00 PM0comments Links to this post